Qiimaha Kalluunka Suuqyada Muqdisho oo Hoos U Dhac Laga Dareemayo – Goobjoog News
Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay qiimaha kalluunka uu aad u sareeyay ayaa hadda waxaa ku yimid hoos dhac taas oo ay kalluumeysatadu ku sababeyeen xilliga kuleylaha ee lagu jiro.
Marka la gaaro xilliga kuleylaha Somaaliya ee bilaha Maarso iyo Apriil ayaa waxaa hoos u dhaca qiimaha kalluunka, waxaana dibadda usoo baxa kalluun badan oo si fudud ay ku heli karaan kalluumeysatada.
Kaawaanka kalluunka ee Degmada Xamar-weyne oo ah halka ugu badan ee lagu iibiyo kalluunka Magaaladda Muqisho ayaa hadda waxaa ka jira hoos u dhac ku yimid sicirka lakala siisto Kalluunka.
Munasar Maki Aweys oo kamid ah kalluumeysatada iibiya malaayga ayaa Goobjoog News u sheegay in hoos u dhac uu ka jiro qiimaha kalluunka iyadoo wax badan uu iska bedelay qiimihii marki hore la iibinayay.
“Kuleylaha xilligaan oo kale marka la gaaro malaayga banaanka ayuu imaanaa oo hawada ayuu soo raadinaa…. Qiimaha malaayga hadda wuxuu u dhaxeeyaa $2.5 ilaa $4 halka marki hore uu ahaa $4 ilaa $8”Ayuu yiri Munasar oo ka mid ah kalluumeysada.
Kalluunka ayaa inta badan waxa uu sare u kacaa waqtiyada ay dabeylaha ka jiraan xeebaha, halka uu hoos u dhaco xiliyada Kuleylaha.